रेणुकाको पाठकहरूमाझ ल्याइन् पहिलो नेपाली महिलाकृत ताङ्का संग्रह | Rajmarga
काठमाडौँ । जापानी साहित्यबाट नेपालमा भित्रिएको हाइकु साहित्यमा नेपाली लेखकहरूले चासो पछिल्लो समयमा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको पाइन्छ । यसै क्रममा धेरै लेखकहरूले हाइकु र ताङ्का लेखनमा आफ्नो कमल चलाउँदै आएका छन् ।
यसै परिप्रेक्ष्यमा नेपालकै पहिलोपटक महिलाकृत हाइकु संग्रह ‘साकुरा र सुस्केरा–२०५९’ पाठकहरू सामु ल्याएकी रेणुका भट्टराईले हालै ‘रेणुका भट्टराईका ताङ्काहरू’ नामक ताङ्का संग्रह नेपाली पाठकहरूमाझ ल्याएकी छिन् ।
ताङ्का संग्रहका केही ताङ्काहरू :
बादलको फुल्का झैँ
के शरद के गृष्म
जहिले पनि उस्तै ।
के संझौता गर्ने र !
(रेणुका भट्टराईका ताङ्काहरूबाट)
यो संग्रह महिलाकृत पहिलो ताङ्का संग्रह हो । यसको प्रकाशन पेरोल साहित्य प्रतिष्ठान नेपालले गरेको हो । ११५ पृष्ठ रहेको यो संग्रहमा ८५ वटा ताङ्काहरू रहेका छन् । रंगीन कलेवरसहितको यो ताङ्का संग्रहको मूल्य रु. २५१।– रहेको छ ।
यस संग्रहभित्र हाइकु विद्यायन नेपालका अध्यक्ष वी.के. पाल्पालीले ‘रेणुकाको ताङ्कावाटिकामा एक नजर’ शीर्षक दिएर नेपाली ताङ्का र हाइकु साहित्य इतिहास र वर्तमान अवस्थाको बारेमा विश्लेषण टिप्पणी गरेका छन् ।
ताङ्का र हाइकु पारखी एवं अनुसन्धानकर्ताहरूको लागि यो पुस्तक उपयोगी हुने देखिन्छ ।
Previous post: सडक दुर्घटना एकै परिवारका १४ ले ज्यान गुमाए
Next post: चालीस लाख भारतको आसामबासीसँग नागरिकता छैन, तर किन ?